ကျောက်ပန်းတောင်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ အတွက် ဘိုးဘွားတွေ လိုအပ်နေတဲ့ရေတွင်း အလှူအတွက်စတင်မတည်ကာအလှူကောက်ခံနေတဲ့အဆိုတော်ယုန်လေး – Shwe Myanmar
ကျောက်ပန်းတောင်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ အတွက် ဘိုးဘွားတွေ လိုအပ်နေတဲ့ရေတွင်း အလှူအတွက်စတင်မတည်ကာအလှူကောက်ခံနေတဲ့အဆိုတော်ယုန်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးကတော့ အနုပညာအပေါ် ချစ်ပြီးအနုပညာလမ်းမှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ တက်သစ်လူငယ်တွေကို ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ဒုက္ခရောက်သူတိုင်းကို အမြဲ တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းလွန်းတဲ့ ပရဟိတစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာမောင်နှမတွေအပြင် ပရိသတ်တွေကပါ လေးစားချစ်ခင်နေကြရတာပါ။
သီချင်းသစ်တွေမှာလည်း တက်သစ်စလူငယ်တွေကို တွဲခေါ်ကာ မြေတောင်မြှောက်ပေးလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုသာမက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ထိပ်ဆုံးကလုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးပါ။ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး မသိလို့အမှားတွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်လည်း ပရိသတိတွေကျေနပ်လောက်တဲ့ထိ တောင်းပန်တတ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲနော်။
လက်ရှိမှာတော့ “ကျွန်တော်လည်း ခက်ခဲတဲ့ ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းနေရပါတယ် . အဲ့အတွက် . အရင်လို အကူညီလို တဲ့ သူတိုင်းတွေ့ရင် မလှူနိုင်တော့ပါဘူး . ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် ၁လပိုင်းမှာ စပြီး အရင်လို တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ပါတယ် . ၁ ရက် ၁လ မှာ ကြေညာရိုက်ခွင့်ပေးတဲ့ Steel Dragon ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Vit C Orange . M Net နဲ့ တခြား အလုပ်တွေပါ အရင်လို တက်ကြွစွာ ပြန်လုပ်ရပါတော့မယ် ။ အဲ အတွက် ထုံးစံအတိုင်း လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို တက်နိုင်သလောက်လေး တွေပြန်ကူပါတော့မယ် ။ ၁ ရက်နေ့ကတော့ လူကြမ်းမင်းသားကြီးများကို အလုပ်ပေးနိုင်သလို . ဆန် ဆီ လိုအပ်တာများလည်း ကူညီ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု အရင်လ ထဲက အကူညီတောင်းထားတဲ့ကျောက်ပန်းတောင်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ မှဘိုးဘွားတွေအတွက် ရေတွင်း လိုအပ်နေတဲ့ အတွက်ရေ တွင်း အတွက်အများကြီး လှူချင်ပါသော်လည်း အခုမှ အလုပ်တွေ ပြန်စတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ၅ သောင်း စမတည်ပြီး ကျွန်တော် နဲ့ အတူ ဘိုးဘွားတွေ
အတွက် ရေတွင်း လေး အကောင်ထဲ ဖော်ဖို့ အတွက်အလှူ ခံ ချင်ပါတယ် ”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ ယုနျလေးကတော့ အနုပညာအပျေါ ခဈြပွီးအနုပညာလမျးမှာ လြှောကျလှမျးဖို့ ခကျခဲနတေဲ့ တကျသဈလူငယျတှကေို ကူညီပံ့ပိုးနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါ။ ဒုက်ခရောကျသူတိုငျးကို အမွဲ တတျနိုငျသလောကျ အကူအညီပေးတတျတဲ့ စိတျထားကောငျးလှနျးတဲ့ ပရဟိတစိတျအပွညျ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အနုပညာမောငျနှမတှအေပွငျ ပရိသတျတှကေပါ လေးစားခဈြခငျနကွေရတာပါ။
သီခငျြးသဈတှမှောလညျး တကျသဈစလူငယျတှကေို တှဲချေါကာ မွတေောငျမွှောကျပေးလရှေိ့သူဖွဈပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှကေိုသာမက ပရဟိတလုပျငနျးတှကေိုလညျး ထိပျဆုံးကလုပျဆောငျနသေူတဈဦးပါ။ အမွဲပြျောပြျောနတေတျပွီး မသိလို့အမှားတှပွေုလုပျခဲ့ရငျလညျး ပရိသတိတှကေနြေပျလောကျတဲ့ထိ တောငျးပနျတတျတဲ့ ရိုးသားတဲ့အနုပညာရှငျတဈဦးပါပဲနျော။
လကျရှိမှာတော့ “ကြှနျတျောလညျး ခကျခဲတဲ့ ကာလတှကေိုဖွတျသနျးနရေပါတယျ . အဲ့အတှကျ . အရငျလို အကူညီလို တဲ့ သူတိုငျးတှရေ့ငျ မလှူနိုငျတော့ပါဘူး . ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈ ၁လပိုငျးမှာ စပွီး အရငျလို တကျတကျကွှကွှ နဲ့ အလုပျတှေ ပွနျလုပျပါတယျ . ၁ ရကျ ၁လ မှာ ကွညောရိုကျခှငျ့ပေးတဲ့ Steel Dragon ကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ ။
Vit C Orange . M Net နဲ့ တခွား အလုပျတှပေါ အရငျလို တကျကွှစှာ ပွနျလုပျရပါတော့မယျ ။ အဲ အတှကျ ထုံးစံအတိုငျး လိုအပျတဲ့ နရောတှကေို တကျနိုငျသလောကျလေး တှပွေနျကူပါတော့မယျ ။ ၁ ရကျနကေ့တော့ လူကွမျးမငျးသားကွီးမြားကို အလုပျပေးနိုငျသလို . ဆနျ ဆီ လိုအပျတာမြားလညျး ကူညီ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
အခု အရငျလ ထဲက အကူညီတောငျးထားတဲ့ကြောကျပနျးတောငျး ဘိုးဘှားရိပျသာ မှဘိုးဘှားတှအေတှကျ ရတှေငျး လိုအပျနတေဲ့ အတှကျရေ တှငျး အတှကျအမြားကွီး လှူခငျြပါသျောလညျး အခုမှ အလုပျတှေ ပွနျစတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျော ၅ သောငျး စမတညျပွီး ကြှနျတျော နဲ့ အတူ ဘိုးဘှားတှေ
အတှကျ ရတှေငျး လေး အကောငျထဲ ဖျောဖို့ အတှကျအလှူ ခံ ခငျြပါတယျ ”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ဖျောပွခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Previous PostPrevious မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ပရဟိတသူရဲကောင်းလေး
Next PostNext ဒါမျိုးပိုစ့်ကမှ ရှယ်ရမှာ ခင်ဗျ..ဒီလိုဂေဟာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါးပါပဲဗျာ